Mofonaina 24 Novambra 2014 | FJKM Amboniloha
MIFALY AMIN’NY FAMONJENA NY MINO
« …fa ny sakaizan’ny mpampakatra izay mitsangana hihaino azy dia mifaly indrindra noho ny feon’ny mpampakatra ary efa tanteraka izany fifaliana izany » (and 29)
Ny toe-tsaina amam-pitondrantena tokony hananan’ny mino eo am-piandrasana ny famonjen’ Andriamanitra.
Fakam-panahy nahazo ny mpianatr’i Jaona teto ny hoe : satria izy no taloha sy nanao batisa an’i Jesoa, dia izy no tokony ho lohany sy ambony. Tsy izany kosa anefa ny tao an-tsain’i Jaona. Nanaiky tamim-panetretena ny anjara fanompoana raisiny eo amin’ny tantaram-pamonjena izy : « Izy tsy maintsy mitombo, fa Izaho tsy maintsy mihena », hoy izy. Izany dia mampianatra antsika mba hifaliantsika amin’ny anjara fanompoana izay atolotra antsika fa tsy ny hiady ny ho lohany hatrany. Mpiara-miasa amin’ Andriamanitra hatrany isika na inona na inona anjarantsika.
Mifaly amin’ny fahatanterahan’ny famonjena
Teny fampanantenana nataon’ Andriamanitra tamin’i Jaona ny hanomanany ny lalàn’i Kristy. Ny fitarihan’ny Fanahy Masina sy ny zavatra rehetra izay hitranga dia nanamarina fa i Jesoa tokoa no Ilay Mesia nampanantenaina azy. Ny fahatanterahan’ny Tenin’ Andriamanitra àry no anton’ny fifalian’i Jaona eto satria :
– Nahazo anjara amin’ny famonjena ihany koa izy
– Andriamanitra dia tsy mandainga fa mitazona hatrany ny teny nomeny
Nahoana no mifaly amin’izay mety ho anjara fanompoantsika isika ?
Catégories :	Mofon'aina	/ par AnjGab 25 novembre 2014
Mofonaina 23 Septambra 2014 Asan'ny Apostoly 13:32-39 Tsy mora akory ny fandresen-dahatra ny Jiosy hino fa Jesoa Kristy no...